Guddiga Dastuurka ee Madaxa-banaan oo sheegey iney gaba-gaba u mareyso dhameystirka Dastuurka – Kalfadhi
Guddiga Dastuurka ee Madaxa-banaan oo sheegey iney gaba-gaba u mareyso dhameystirka Dastuurka
Guddiga Dastuurka ee Madaxa-banaan ayaa sheegay ineysan ku saamoobi doonin isqabqabsiga siyaasadeed ee dalka ka jira, marka ay ka shaqeynayaan Dastuurka Kumeel-Gaarka ah ee Soomaaliya. “Anaga, oo hawsheenna gudaneyna oo aysan na saameyneyn is-qabqabsiga jira iyo duruufaha dalka ka jira, ayaan waajibkeenna gudaneynay oo inta iska fariisanay gacmaha ma aynaan ka laaban” ayey tiri Guddoomiye Kuxigeenka Guddiga Dastuurka ee Madaxa-banaan, Marwo Muumino Sheekh Cumar.
Muumino waxay Gudduga Dib U Eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya uga mahadnaqday inuu ku soo wareejiyey 4 cutub oo kale, oo ka mid ah cutubyada Dastuurka qabyada ah. Waxay balan qaadday iney cutubyada lagu wareejiyey si dhaqsa ah uga shaqeyn doonaan.
Guddoomiye Muumino waxa ay sheegtay in dib u eegista afarta cutub ee uu u soo gudbiyey Guddiga Dib u Eegista Dastuurka ee Baarlamaanka ay horay uga sii shaqeynayeen, ayna wax fiican u tahay iney hadda heleen iyagaa oo laga soo shaqeeyey. “Inkastoo hadda nalagu wareejiyay cutubyadan hadana, iyada oo aan naloo soo gudbin ayaan howsha galnay, oo waliba heer gabogabo ah ayaan mareynaa, maantana waa mahad Alle; si cad ayaa naloogu wareejiyay” ayey tiri Muumina.
Guddoomiyaha Gudiga Dib U Eegista Baarlamaanka Senatar Cabdi Xassan Cawaale (Qeybdiid) ayaa, isaga oo muujinaya xaaladda adag ee ay ku shaqeynayaan Guddiyada Dastuurka ee Madaxa-banaan, waxa uu ku wareejiyay 4-ta cutub ee ay ka soo shaqeeyeen, waxa uuna yiri “ dhibaatooyinka iyo duruufaha jira iyadoo la ogyahay, ha noqoto mid agab, mid dhaqaale ama mid siyaasadeed iyo xafiisyadii oo aan dhamaystirneyn, hadana labadaan Guddi waxaan ku amaanayaa in ay si mutadawacnimo ah hawshan u qabanayaan, waayo waxa ay isku xilqaameen howshaas in la wado”.
Guddoomiye, Senatar Qeybdiid waxa uu mid mid u sheegay cutubyada ay Guddiga Dastuurka ee Madaxa-banaan ku wareejiyeen, wuxuuna yiri “ waxaan ku wareejineynaa Cutubyada Dastuurka, oo aan soo xulnay ee 6-aad ilaa 9-aad, oo aan dooneyno in ay u diyaariyaan oo ay ka saxaan dhinacyada farsomo iyo waxa uu u baahanyahayba”.